यसरी प्रयोग हुँदैछन् प्रम ओली, आफ्नै परम्भक्त भन्नेहरुबाटै हुँदैछ ठुलै षडयन्त्र « Light Nepal
Published On : 11 October, 2018 2:48 pm
रुपनी जि.एम । २५ असोज, काठमाण्डौ ।पछिल्लो समय देशको कम्युनिष्ट राजनीति निकै चर्चामा पुगेको छ । पार्टीभित्रको एकता, वामदेव गौतम उम्मेदवार हुने बिषय र सरकारका बिषयमा नेपालको कम्युनिष्ट राजनीति चर्चाको बिषय बन्न पुगेको छ ।
यसमा पनि विशेषगरि बामगठबन्धनका सुत्रधार एंव नेकपाका सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमको विषयलाई लिएर यो लागु भएको पाईन्छ । राजनीतिक सगर्मीलाई आंकलन गर्ने होे भने गौतमलाई कुनैपनि हालतमा संसद प्रवेश गराउने विषय नै देशको मुल राजनीतिक विषय बन्न पुगेको छ ।
संसद प्रवेश गर्ने गौतमको चाहाना त होला तर उनको चाहाना भन्दा पनि पार्टीका केही शिर्ष नेताको पनि चाहाना उच्च भएको सहजै देख्न सकिन्छ । जसमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष ओलीले नै गौतमलाई सांसद बनाउन खोजेका छन ।
कम्युनिष्ट राजनीलिाई अझैं उचाईमा लैजान नेकपाका नेता गौतमको भुमिका अति नै महत्वपुर्ण रहेको र पार्टीमा उनको आवश्यकता खड्किएको दुई अध्यक्षले राम्रै महसुस गरेपश्चात नै गौतमलाई सांसद प्रवेश गराउने विषयले तिव्र रुप लिन पुगेको हो ।
पार्टीलाई सुदृद्ध र सशक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्नकोलागि नेकपाका नेता गौतमको आवश्यकता अपरिहार्य भएको अनुभुत गदै दुई अध्यक्षका साथै पार्टीका अन्य केही शिर्ष नेताले बामदेवलाई पछिल्लो केही समयदेखि नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुबाट सांसद बनाउने प्रयास नगरेका पनि होईनन् ।
दुर्भाग्यवस पार्टीपंतिबाटै गरिएको प्रयास देशका केही जिल्लामा सफल भने हुन सकेन । आफुलाई लगाएको गुणको पैंचो तिर्नहोस् या पार्टीमा बामदेवको खाँचो महसुस गरेरै किन नहोस् प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा बामदेवलाई पहिला डोल्पा त्यसपछि वाँके र अन्ततः देशकै राजधानी काठमाण्डौमा ल्याई पु¥याईयो ।
काठमाण्डौ ७ बाट बामदेवलाई उपनिर्वाचन मार्फत संसद प्रवेश गराउने विषयले नेपालको राजनीतिलाई वि.सं. २०७२ सालमा आएको भुकम्पले त्यति सिंगो देशलाई के हल्लाएको थियो होला र जति यतिखेर हल्लाएको छ । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा रामवीर मानन्धरको राजीनामा घोषणासंगै अहिले मुलुकको राजनीतिक वामदेव गौतम केन्द्रीत भएको छ ।
पार्टीमा रामवीरलाई ओली निकट कार्यकर्ता मानिन्छ । त्यसैले पनि ओलीकै सल्लाह र निर्देशनमा रामवीरलाई राजीनामा दिन लगाएर उनको ठाउँमा गौतमलाई उपनिवार्चनमा खडा गराउने प्रधानमन्त्रीको योजना र चाहाना दुवै हो भनेर विश्लेषकहरु बताउँदछन् । आफ्नै परम्भक्त र कार्यकर्ताहरुबाटै ओली पछिल्लो समय निकै नै आलोचित बन्न पुगे ।
यसलाई ओलीको बोलीमा अब कुनै दम्भ नभएको पनि भन्न सकिन्छ । त्यसैको नतिजा हो ओली आफ्नै कार्यकर्ताहरु र परम्भक्त भन्नेहरुबाट बामदेवलाई काठमाण्डौ ७ मा चुनाव गराएर संसदमा ल्याउने निर्णयमा पछि हटेको । दबाब र प्रभाव दुवैमा नियन्त्रण गुम्ने देखेपछि प्रम ओलीले प्रचण्डको साथलाई छोडेर बामदेवकै विरोध गरि हिंड्ने रक्षा मन्त्री ईश्वर पोख्रेलको हात थाम्न पनि पुगेको ।
सचिवालय एक सदस्यका अनुसार रामवीरले राजीनामा घोषणा गरेकै कारण उनले राजीनामा दिनै पर्ने वातावरण बनाएर उनको ठाउँमा गौतम नभई अरु नै कुनै नेतालाई उठाउने तयारीमा लाग्दैछन् रे प्रम ओली । यसबाट प्रष्टै हुन्छ कि प्रम ओलीले आफ्नो निर्णयमा प्रभावशाली नेताको छवीमा अब चल्न नसक्ने भएछन् ।
यसैगरि उनी पार्टीका केही गद्यार नेता र कार्यकर्ताहरुको ईशारामा चल्दै जाने हो भने उनको राजनीति धरापमा पर्न धेरै समय पर्खनै पर्दैन । राष्ट्र नायकको रुपमा आफ्नो छवी बनाएका ओलीले आफ्नै बोलीमा आफैले ठेगान लगाएर मुलुकको समृद्धि अगाढि बढाएर चुस्त दुरुस्त बढ्ने समय हो यो ।
गौतमको उम्मेद्वारीलाई लिएर चुनावी परिणाम गलत आउने हो कि भन्नेमा कार्यकर्ता पंक्तिमा जुन चर्चा चुलिएको छ, त्यो स्वभाविक हो तर परिणाम जसरी भएपनि उल्टाएर आफ्नै पक्षमा पारिन्छ र फेरी अर्को नयाँ ईतिहास रच्न सकिन्छ भन्ने आत्माविश्वास प्रम ओलीले गुमाउँनु हुँदैन भन्ने पनि राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँदछन् ।
विश्लेषकहरुको भनाई अनुसार यदि ओली यसपटक आफ्नै बोलीबाट पछि हटे भने उनलाई राजनीतिमा कठपुतली बनाउन सरकारमा रहेर पनि प्रतिपक्षमा बसेर आलोचना गरिरहेकाहरुलाई निकै नै सजिलो हुनेछ ।
ईतिहाँस साक्षी छ माधवकुमार नेपालले दुई दुई पटक हार्दापनि प्रधानमन्त्री भएर देश चलाएकै हुन् । यसैबाट प्रष्टै हुन्छ कि हारेपनि शिर्ष नेताहरुको भूमिका कति महत्वपुर्ण हुन्छ भन्ने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो बुझ्न जरुरी छ आफुले गरेको निर्णयको विरुद्धमा आफ्नै कार्यकर्ताहरुबाट आएको चर्को विरोधले कतै राजा भन्दापनि राजाबादीले राजतन्त्र मासे जस्तै ओली भन्दापनि ओलीबादीले ओलीको राजनीति मास्ने दाउपेच त हैन ?
प्रम ओलीले यतिबेला मात्र हैन कुनैपनि परिस्थितिमा यो बिर्सनु हुँदैन कि आफुलाई पार्टीको राष्ट्र नायक बनाउँदै कदम कदममा साथ दिएर यो स्थानसम्म गौतमले धेरै योगदान गरेका छन् भन्ने । र गौतम पनि नेता नेपाल जस्तै मुलुकको लागि अपरिहार्य नेता हुन भन्ने । त्यसैले उनलाई सांसद बनाउनका लागि ओलिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नै पर्दछ ।
ओलीले योपनि विर्सन हुँदैन कि सिंगो पार्टीमा यदि कसैले न्वारान देखीको बल लगाएर ओलीलाई सघाएको छ भने त्यो केवल बाम गठबन्धनका सुत्रधार गौतम नै हुन् । ओली देशको प्रधानमन्त्री हुनुका साथै आफ्नै पार्टीको एक कुशल संरक्षक पनि हुन् । त्यसैले ओलीमा यो हेक्का हुन जरुरी छ कि आफ्नै पार्टी भित्रको रोईलोले क्षति आफ्नैलाई पु¥याउने हो न की प्रतिपक्षमा बसेकालाई ।
पछिल्लो समयमा पुर्व प्रधानमन्त्री द्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल नेता गौतमको विरोधमा बोली रहंदा त्यसको बल पोख्रेललाई प्लस हुन्छ नै तर यसको अर्थ यो होईन कि, प्रधानमन्त्री आफुले गरेको निर्णयबाट ब्याक हुनु पर्ने । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ओलीले चाहे भने गौतमको खुट्टा कसैले काट्न सक्दैन ।
त्यसैले पार्टीकोलागि गौतमको जुन अभाव महसुस गरिएको छ । यो एकदमै सराहानीय योग्य नै छ । यसलाई पुरा गर्न ओलीले आफ्नो कमान्डीङ् पावर प्रर्दशन गर्नै पर्ने हुन्छ । र यो देश विकासकालागि नेपाली जनताले पनि महसुस गर्नै पर्ने हुन्छ ।
प्रम ओलीको अहमः भूमिका आगामी सचिवालय बैठकबाट गौतमलाई काठमाडौ ७ बाटै उम्मेदवार उठाएर उपनिर्वाचनको माध्यमबाट जिताउनु सबै नेता कार्यकतालाई निर्देशन दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । गौतमलाई हराउन चर्किएका स्वरलाई बन्द गर्न ओलीसंगै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण भूमिका देखिन्छ ।
एउटा वामगठबन्धनका सूत्रधार गौतम सांसद बाहिर रहेकामा कति मुलुकलाई घाटा भइरहेको छ भनेर आम सर्वसाधारणदेखि नेता सबैले बुझ्न जरुरी छ । गौतम आफ्नो इच्छा चाहनाले नभई मुलुकको आवश्कताले सांसद बन्न प्रयासमा हुन् ।